यस्तो पो रहेछ केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ रक्षामन्त्री आएकै दिन ‘टिकटक’ खोल्नुको रहस्य – Enepali Samchar
यस्तो पो रहेछ केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ रक्षामन्त्री आएकै दिन ‘टिकटक’ खोल्नुको रहस्य
December 1, 2020 adminLeaveaComment on यस्तो पो रहेछ केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ रक्षामन्त्री आएकै दिन ‘टिकटक’ खोल्नुको रहस्य
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो सेयरिङ एप ‘टिकटक’ खोलेका छन् । उनले आइतबार (मंसिर १४ गते) टिकटक खोलेका हुन् । उनले खोलेको टिकटक प्रोफाइलमा उनको तस्वीर भने राखिएको छैन । यो एकाउन्ट भेरिफाइडसमेत भइसकेको छ ।उनको एउटामात्र भिडियो पोष्ट भएको छ । पहिलो दिन खासै चर्चामा नआएको भए पनि दोस्रो दिन सोमबार भने तीव्र रुपमा उनलाई फलो गर्नेहरु बढेका छन् ।उनले कसैलाई पनि फलो भने गरेका छैनन् । उनले पहिलो भिडियोका रुपमा २२ सेकेन्डको भिडियो पोष्ट गरेका छन् । उनको टिकटक एकाउन्ट @kpsharmaoli_official रहेको छ ।
संयोग कि नियोजित ?
उनले मंसिर १४ गते नै टिकटक खोल्नुलाई संयोगमात्र भन्न अवश्य मिल्दैन । यो नियोजित रुपमै भएको देखिन्छ । टिकटक चिनियाँ उत्पादन हो ।
भारतमा यो प्रतिवन्धित छ । अमेरिकाले पनि पटक पटक प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास गर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने मंसिर १४ गते चीनका राज्य परिषद् सदस्य तथा रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हे आएकै दिन टिकटक खोले । पक्कै पनि रक्षामन्त्री वेइले अहिलेसम्म टिकटक पनि छैन ? भनेर त सोधेनन् होला ।
तर ओलीले त्यही दिन नै टिकटक खोल्नुलाई भने कुटनीतिक जगतमा अर्थपूर्ण तरिकाले हेर्न थालिएको छ । ओली र उनको सचिवालयले तर्क अवश्य गर्ला नै । तर चिनियाँ रक्षामन्त्री आएकै दिन खोल्नुलाई भने संयोग कसरी मान्ने ?
प्रधानमन्त्री ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अप्ठेरोमा परिरहेका बेलामा चीनले साथ दिइरहेको छ । कुनै पनि हालतमा नेकपा फुट्नु हुन्न भनेर नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छी लागेकै हुन्छिन् ।
रक्षामन्त्री हेइको भ्रमण पनि नेकपाका नेताहरुलाई सम्झाउने प्रयास स्वरुप भएको बुझिन्छ । चीनले कुनै पनि हालतमा नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार नै चाहिने अडान राख्दै आएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
सम्भवतः यसपटकको खड्को पनि पार गर्ने गरी ओलीले चिनियाँ रक्षामन्त्री आएकै बेलामा टिकटकमा मोह देखाएका त हैनन् ?
बैदेशिक रोजगारी UAE को लागि यी हुन सबैभन्दा राम्रा ५० कम्पनीहरु (सूची सहित ,सेयर गर्नुहोस)
दाजुको न्यायका लागि ल’डिरहेकी सदिच्छालाई ज्यानको ख’तरा भएपछी रुदै लाइभ आएर गरिन यस्तो अपिल ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )
वडा कमिटीका कार्यकर्तालाई सिधै केन्द्रीय सदस्य बनाउँदै ओली, प्रचण्ड-नेपाल हेरेको हेर्‍यै भए